Gara Itti Adeemtu Baruu Yoo Feete Eenyu Akka Taatee fi Eessaa Akka Dhufte Beekuu Qabda -
Gara Itti Adeemtu Baruu Yoo Feete Eenyu Akka Taatee fi Eessaa Akka Dhufte Beekuu Qabda
bilisummaa July 17, 2013	1 Comment
WASHINGTON, DC — Lammi Awustraaliyaa hidda dhalata Oromoo kan taate Toltuu Tufaa umriin ishee Digdamii torba. Abbaan Toltuu Oromoo harmeen ishee immo lammii biyya Turkii ti. Afaan Oromoo Afaan Turkii fi Afaan Ingilizii sirritti beekti.
Afaan ofii sirritti beekuun Aadaa fi seenaa saba ofii baruuf furtuu dha kan jettu Toltuun ijoollee ofii ijoollummaa kaasee afaan ofii barsisuun itti gaafatama maatii ti jetti.
Yeroo ammaa gosa barnootaa qor-sammuu ykn Saaykooloojiin Doktorummaa ykn pii eech Dii (PHD) barataa kan jirtu Toltuun hogganaa gaarii ta’uuf nama ajajuu otoo hin taane ofii hojjatanii jaalala horachuutu barbaachisa jetti.
Gaaffii fi Deebii Toltuu Tufaa waliin gaggeeffamee armaa gadiitti caqasaa
Previous The Oromo and the War on Terror in the Horn of Africa
Next The Truth, a few Extremist Amhara diasporas and medias couldn’t live with
Galatomaa Toltuu fi Jaalanneen !